ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သလား - Hello Sayarwon
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ ဟော်မုန်းပမာဏတွေဟာ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ ပထမဆုံး ကိုယ်ဝန်ရှိရင် သူမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ကလေးကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် ရင်သားအပါအဝင် အခြား ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ သူမရဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ ရင်သားတစ်ရှူးတွေဟာ ကင်ဆာ ခံနိုင်တဲ့ တစ်ရှူးတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Estrogen ဟော်မုန်းပမာဏဟာ တိုးတက်လာပြီး မိခင်နို့ထွက်ဖို့အတွက် ရင်သားဟာလည်း ကြီးမားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ တတိယသုံးလပတ် အတွင်းမှာ (မတော်တဆ ပျက်ကျသည်ဖြစ်စေ၊ တမင်ဖျက်ချသည် ဖြစ်စေ) ဆဲလ်တွေရဲ့ ပုံမှန် ဖြစ်ပေါ်မှုကို ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားစေပြီး ကင်ဆာ ပိုမို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ဒီဟော်မုန်း ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီသီအိုရီကို လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Is Abortion Linked to Breast Cancer?. http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/moreinformation/is-abortion-linked-to-breast-cancer. Accessed September 6, 2016
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်တွေကို ထိခိုက်နိုင်သလား